Kuthunguthwa osolwa ngokubulala eMthulini | Eyethu News
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 26 mins ago
Kuthunguthwa osolwa ngokubulala eMthulini
“Usolwa ngokubulala izithandani ez atholwa zibulewe emfuleni.”
Umsolwa ofunw aphansi phezulu
UFUNWA uthuli ngabakwa sidlodlo owesilisa osolwa ecaleni lokubulala izithandani zase ndaweni yase Nottingham Road ngenyanga edlule.
Ngokuthola kwephephandaba uMngeni Eyethu lowesilisa igama lakhe uXolani Brian Ndlovu (32) kanti uke waboshwa ngaphambilini ngawo amacala okugqekeza ngobudlobongela ezindaweni ezahlukene. Lowelisa udume kakhulu emphakathini ngegama lika Maja.
Kuthiwa lowesilisa wabe esegixabezwa iminyaka eyisikhombisa ebadla ejele okungenzekanga njengoba wahlala iminyaka eyisihlanu kuphela. Kuthiwa uphume ejele ngenyanga ka Novemba onyakeni ofile.
Ngenyanga edlule amaphoyisa ase Mthulini athola umbiko ngokuduka kwezithandani ezabe zihlala endaweni yomntakabani eyaziwa ngokuthi i-The Bend kumgwaqo u Lotheni.
Lezi zithandana amagama azo kwakungu Mnuz Roger Solik (66) kanye no Nkk Christine Solik (57).
Emva kokubona ukuthi lezi zithandani zabe zingabonwa nango khalo omunye womakhelwane wazo lezi zithandani wazama ukuzifuna. Uthe uma bengena endlini yazo eyabe igqekeziwe bathola yonke into imapekentwane kuyo indlu. Ngenkathi uma amaphoyisa enikele kulendlu yalezi zithandani athola amachaphazelo egazi kanti nemoto yohlobo lwe Hundai 1×35 yayingabonwa. Lemoto yagcine isitholakala yebiwe endaweni yase Taylors Halt. Lezi zithandani zatholwa zibulewe emfuleni iNzinga endaweni yase Mpendle.
Ngokusho kokhulumela amaphoyisa uKaputeni Nqobile Gwala uthe akwaziwa ukuthi lowesilisa ukuziphi izinkalo.
“Ngokwazi kwethu lowesilisa ujwayele ukuhlala ezindaweni ezahlukene okubalwa kuzo ilokishi lase Mlazi, eMpophomeni, eMafakatini kanye nase France eMgungundlovu,” kusho uGwala. Uqhube wathi umzimba wakhe ufinyelela kumamitha angu 1.75 ama mitha kanti futhi wakheke kahle emzimbeni.
UGwala unxuse umphakathi ukuba wazise amaphoyisa ngaye lomsolwa kwinombolo 08600 10111 noma uWarrant Officer Mdunge ku 082 368 821
Bekuwusizi lodwa kukhunjulwa umfundi oshone engozini yebhasi